राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा प्रसूति सेवा लिनेको संख्या बढ्दै – वाणगंगा अनलाइन
राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा प्रसूति सेवा लिनेको संख्या बढ्दै
राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरबाट प्रसूति सेवा लिनेको संख्या बढेको छ। पछिल्लो समय दैनिक १५-२० जना सम्म आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। कुनै समयमा अस्पतालमा प्रसूति सेवा लिन समेत डराउने अवस्थामा रहेको अस्पतालमा मासिक ३०० जनाभन्दा बढीले प्रसूति सेवा लिने गरेको अस्पतालका प्रमुख निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सर्वेश शर्माले जानकारी दिए।
त्यसैगरी अस्पतालमा पछिल्लो समयमा विशेषज्ञ डाक्टरह आएका कारण पनि सेवा राम्रो हुने भएकाले प्रसूति सेवा लिन आउनेहरुको संख्या बढेको डा. शर्माले बताए। प्रसूति सेवा लिनेहरुमा दैनिक १५/२० जनाको नर्मल र कम्तीमा २ जनाको सर्जरी गरी डेलभरी हुने गरेको छ। त्यसैगरी अस्पतालमा आइसियु सेवा नहुँदा जटिल अवस्थामा बच्चा जन्मिए त्यस्तालाई रिफर गर्ने गरिएको छ। यहाँ सेवा लिनेमध्ये पाँच प्रतिशत त्यस्ता केस हुने गरेका छन्। ती बिरामीहरुलाई प्राइभेट अस्पतालमा वा नेपालगंज रिफर गरिँदै आइएको छ।
पछिल्लो समय डाक्टरहरु पनि आएकाले सेवा प्रवाह सहज हुँदै बताइएको छ। प्रादेशिक अस्पताल अहिले ५० बेडको मात्र हो। तर, अस्पतालमा प्रसूति सेवा लिनेको संख्या बढ्दै गएपछि कोठा र बेडको समस्या भएको अस्पतालकी नर्स इञ्चार्ज सरस्वति उपाध्यायले बताइन्। अस्पतालमा पश्चिम दाङलगायत सल्यान, रोल्पा, घोराही र लमहीसम्मका बिरामीहरु आउने गरेका छन्। दाङकै घोराहीमा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विवादका कारण सेवा प्रवाह राम्रो नपाएपछि आफूहरु प्रादेशिक अस्पताल आएको घोराही हापुरकी मीनादेवी जैसीले बताइन्।
‘हामीलाई तुलसीपुरभन्दा घोराही नजिक पर्दछ,’ उनले भनिन्, ‘तर घोराहीमा विवादका कारण राम्रो सेवा नपाइने भएकाले तुलसीपुर आएका हौं।’ सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सुत्केरीहरुलाई पोषण भत्ताका लागि १८ सय र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ३२ सय गरी पाँच हजार रुपेयाँ दिने भएकाले पनि अस्पतालमै सेवा लिन आउने बढेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य प्रावधान शाखा अधिकृत ओमप्रकाश न्यौपानेले बताए। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा गष्त आर्थिक वर्ष सुत्करीको मृत्यु दर शून्य रहेको बताइएको छ।
नेवारी समुदायले आज किया पूजा अर्थात भाइटीका लगाउँदै